Ergadii Golaha Guurtida Somaliland ee Jigjiga nabadeynta utegey oo guul lasoo gurya noqday. | Saraar Media Forum Discussion
Posted by B Tarabi on March 30, 2012 in News, Somaliland · 0 Comments
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score) Hargeysa (SaraarMedia)-Xubno ka tirsan Golaha Guurtida Somaliland oo uu hogaaminayey Gudoomiyaha gudida joogtada ah ee aqalkaasi Mudane Muxumed Aw Axmed kana soo noqday Xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga isla markaana kala soo xaajooday Maamulkaasi wax ka qabashada dagaalo ka dhacday dhawaan degmada Gaashaamo ayaa maanta ka warbixiyey safarkoodii nabad-doonimo ee ay ku tageen magaalooyinka Jigjiga.
Weftigan oo uu hogaaminayay Gudoomiyaha Gudida Joogtada ah ee Golaha Guurtida Mudane Muxumud Aw Axmed iyo Xaaji cabdikariin Xuseen (X Cabdi Waraabe) oo ka mid ahaa Xubnaha weftigan oo saxaafadda kula hadlay xarunta golaha guurtida Somaliland ee magaalada Hargaysa ayaa sheegay inay hawl nabadeed u tageen dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana ay kulmo la yeesheen madaxda sare oo uu ku jiro madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamud Cumar.
Mudanayaasha Guurtidu waxay sheegeen in heshiis ay la soo gaadheen madaxdii ay la kulmeen, isla markaana qaab nabadeed lagu dhamaynayo Dagaaladdii ka dhacday deegaankaasi gaashaamo.
Gudida Guurtidu waxay sheegeen in la sii daayey dadkii ay dawlada Itoobiya ka qab-qabatay aaggii shaqaaqadaasi ka dhacday. Halka sidoo kalena dadkii hore looga qabqabtay deegaanka dacawaley iyagana la sii daynayo.
weftigu waxay sheegeen inay Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) xog warran ka siiyeen sida ay ku soo dhamaatay hawshii nabadaynta ahaydee ay u tageen deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Weftigan oo ka koobnaa 16 xubnood waxa ku jiray Salaadiin iyo wax garad kale, waxaanay maagaaladda Jig-jiga ku maqnaayeen muddo shan maalmood ah.
Somali native who lied to get MaineCare benefits pleads guilty to federal charge
Boorame: Dadweyne waddo 1-km ah iskaa wax u qabso ku dhisanaya markii ay ka quusteen D/Hoose